Antonio Conte oo weli hagaajinaya dhibaatooyinkii uu Chelsea kaga soo tagay Mourinho – Gool FM
Antonio Conte oo weli hagaajinaya dhibaatooyinkii uu Chelsea kaga soo tagay Mourinho
(London) 22 Oktoobar 2016. Iyadoo ay Chelsea isku diyaarineyso inay dib Stamford Bridge ugu soo dhaweyso macallinkeedii hore ee Jose Mourinho, tababare Conte ayaa sheegay in kooxda reer London uu weli baaqi ku yahay dhaawacyada iyo niyad jabka kal ciyaareedkii hore.
Blues ayaa PL ku guuleysatay 2014-15, laakiin sheekada ayaa durba isbadeshay iyadoo ay kooxda bilowday inay u dagaalanto inaysan heerka labaad ku laaban ka hor inta aan kooxda laga ceyrin macallinka reer Portugal bishii December ee sanadii hore.
Chelsea ayaa ku dhammeystay kaalinta 10-aad ee horyaalka iyadoona seegtay tartamada Yurub, waana wax weli ugaarsanaya kooxda sida uu qabo Conte ka hor kulanka ay berito soo booqan doonto Man United.
“Marka ay jiraan kal ciyaareed ceynkan oo kale ah, xilli ciyaareedyo aad u xun, maxaa yeelay waxaan ku dhammeysanay kaalinta 10-aad ee jadwalka kala sarreynta, waa wax iska caadi ah in ay wax baaqi ku yihiin ciyaartoyda,” Conte ayaa sidaa sheegay.
“Maankooda, maskaxdooda kal ciyaareedkan, halista waa in la lumiyo kalsoonida, sababtan darteed waxaan ku soo cel-celinayaa xilli ciyaareedkan cusub ee Chelsea waa mid aad u muhiim ah.
“Sidoo kale aad ayuu u adag yahay maxaa yeelay waa inaad badeshaa wixii dhacay xilli ciyaareedkii tagay, mana sahlana midaa. Wadada kaliya ay tahay inaan isku badelno waa inaan shaqeyno, si adag u shaqeyno wada jir ciyaaryahannada, kooxda iyo taageerayaasha. Ma sahlanaan doonto in la Kansalo kal ciyaareed xun sida kii xilli ciyaareedkii hore.”.
“Taleefanka kama qaban doono haddii ay Barcelona I soo wacdo.”. Hector Bellerin
HOR DHAC: Arsenal Vs. Middlesbrough